amakhemikhali Agricultural - Changzhou longxin Machinery Co., Ltd
amakhemikhali Agricultural asetshenziswa kwezolimo ukuvimbela futhi ulawule izifo kanye izinambuzane futhi alawule ekukhuleni kwezimila. It is kabanzi nezolimo, ezamahlathi kanye ukukhiqizwa nemfuyo, inhlanzeko kwemvelo futhi yasendlini, etc.
Kunezinhlobo eziningi amakhemikhali yezolimo, ngokuvumelana ukusetshenziswa ke kungenziwa ihlukaniswe zinambuzane, acaricides, rodenticide, nemacides, molluscicides, nesikhunta, yokubulala, ukukhula plant nabalawuli.
Ngokwalo mthombo feed, kungashiwo ihlukaniswe amaminerali, begazi futhi amakhemikhali zamagama. Futhi zingahlukaniswa zibe impuphu, powder wettable, uwoyela emulsifiable, ukhilimu, unamathisele, Colloid, fumigation ejenti, ngentuthu ejenti, granule, kuyizinhlayiyana namafutha ngokuvumelana uhlobo ukucutshungulwa umthamo.
Ncoma nemishini ukudla umkhiqizo impilo ukukhiqizwa: WSJ uchungechunge ovundlile yangaphakathi-ukupholisa umsebenzi ngokugcwele bead esigayweni, WSD uchungechunge ukugeleza okusheshayo isihlabathi esigayweni, WSS uchungechunge evundla isigayo
umugqa yomkhiqizo: enamathela / ekhemisi / zinambuzane / ukhula umkhiqizo umugqa